पुरुष किन धेरै अश्लील चलचित्रमा आकर्षित हुन्छन् ? यस्ता छन् पाँच कारण
प्रकासित मिति : २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार प्रकासित समय : १९:४९
काठमाडौं। पत्रपत्रिका र वैज्ञानिकहरूले पुरुष र अश्लील चलचित्रको अत्यधिक प्रयोगबारे धेरै लेखेका छन् । २०१६ मा बीबीसीलाई ब्रिटिश यौनमनोवैज्ञानिक एन्जेला ग्रेगोरीले भनेकी थिइन् कि सजिलै प्राप्त भइरहेको अश्लील चलचित्रका कारण पुरुषमा यौन उत्तेजना नहुने रोग बढेको छ ।
एउटा अध्ययनले सन् २००० ताका करिब दुईदेखि पाँच प्रतिशत नपुसंकताको कारण अश्लील चलचित्र भएकोमा देखाएको थियो। अहिले ३० प्रतिशत नपुसंकताको कारण अश्लील चलचित्र भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्रिटेनमा यौन दुर्व्यसनको उपचारमा कार्यरत डा.ठाडेउस बिर्चार्डका अनुसार अश्लील चलचित्रमा पुरुष धेरै आकर्षित हुनुको कारण मानव मस्तिष्क पनि हो।
उनी भन्छन्,महिलाहरूमा यौन उत्तेजना हुँदा मस्तिष्कमा अक्सिटोसिन निस्कन्छ जुन मानव सम्बन्ध विस्तारको रसायन हो।
“पुरुषहरूमा भने भासोप्रेसिन निस्कन्छ जुन कुनै कुरामा एकाग्र हुन सघाउने रसायन हो।यही कारणले गर्दा पुरुषहरू इन्टरनेटमा घण्टौँसम्म बाह्य संसार बिर्सेर एकाग्र भई बस्न सक्छन,बिर्चार्ड भन्छन्।
शारीरिक असर देखिन थालेपछि नीलमले १६ वर्षमा अश्लील चलचित्र हेर्न छोडिन्। मेरो पहिलो प्रेमीसँगको सम्बन्धपछि मैले थाहा पाएँ कि मलाई सामान्य यौन क्रियाकलापले उत्तेजित पार्नै सक्दैन,नीलम भन्छिन्।
मलाई लाग्छ अश्लील चलचित्र पूर्ण अप्राकृतिक हुन्छ, र कुनै पनि साथीले त्यसरी यौन सम्पर्क गर्नै सक्दैनन्। मैले अश्लील चलचित्रमा देखेको र साँच्चिकै यौन सम्पर्क राख्दा देखेको शारीरिक भिन्नताले मलाई अत्यायो र मैले सोचेँ समान्य रूपमा यौन सम्पर्क राख्नका लागि पहिले शौचालयमा गएर अश्लील चलचित्र हेरेर आउनुपर्छ?
२-‘अश्लील चलचित्रबाट यौन शिक्षा लिनु ठिक होइन’
अधिकांशमा पुरुष हिंसक थिए र उनीहरूको लक्ष्य महिला थिए जसलाई त्यो हिंसाबाट सन्तुष्टि मिलेको वा वास्ता नभएको देखाइएको थियो। “मलाई लाग्छ विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई राम्रोसँग यौनका बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ,” नीलम भन्छिन्।
३-के अश्लील चलचित्र हेर्नै हुन्न त ?
इरिका भन्छिन्, “अश्लील चलचित्र हेर्नै नहुने होइन। यो मदिराजस्तो हो – कोही एक गिलास पिउँछन्, कोही बोतल नै रित्याउँछन्।
तर अश्लील चलचित्रले आफ्नो शरीरबारे सकारात्मक सोच्न वा साँचो प्रेमबारे सिकाउँदैन। ब्रिटेनमा १८ वर्ष पुग्नुअगाडि अश्लील चलचित्र हेर्न नहुने नियम आउन लागेको छ।
सन् २००९ मा सिविन -नेपालले काठमाण्डूका विद्यार्थीमाझ गरेको एउटा अध्ययनमा ३६ प्रतिशत किशोरकिशोरीले इन्टरनेटमा अश्लील चलचित्र हेर्ने गरेको बताएका थिए।
५-इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग पुस्तिकाका अनुसार
अश्लील चलचित्र हेरेपछि बालबालिकामा उमेर नपुग्दै यौनप्रति रुचि देखिन थाल्छ, यौन सामान्य र सहज हो भन्ने छाप पर्छ।
उनीहरू समकालीन वा वयस्कहरूसँग उत्तेजक व्यवहार गर्न थाल्छन् । परिवार र साथीभन्दा बेग्लै बस्न रुचाउँछन्। गुपदार्थको कुलतमा फस्न सक्छछन् । अध्ययनप्रति रुचि नदेखाउने र आत्महत्यासम्मको प्रयास पनि गर्न सक्छन्। बीबीसी